बुटवल कोरोना अस्पतालका २ पुरुषको मृत्यु - 24/7 समाचार
Home / जीवनशैली/स्वास्थ / बुटवल कोरोना अस्पतालका २ पुरुषको मृत्यु
भैंरहवा। प्रदेस ५ को राजधानी बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बुधबार बिहान दुई जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुबाट उपचार गर्न आएका ४२ र २५ वर्षीय पुरुषको अस्पतालमा ज्यान गएको छ।
मृतक ४२ वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको र अर्का २५ वर्षीय पुरुषको कोरोनाको रिपोट आउन बाकी रहेको अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले जानकारीदिनुभयो।
कोरोना अस्पतालले कपिलवस्तु निवासी ४२ र २५ वर्षीय पुरुष दुवैजनालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको थियो। प्रदेस ५मा कोरोना सक्रमीत धेरै पहिचान भएपनि हालसम्म कसैको पनि ज्यान गएको थिएन। बुधवार एकैपटक दुईजनाको मृत्यु भएको छ।
बुधवार विहान ४ वजे निधन भएका ४२ वर्षीय पुरुषमा कोरोनाको लक्षण सहित श्वास प्रश्वासमा समस्या, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउनेजस्ता लक्षण देखिएको थियो। उनको किड्नीमा समस्या रहेका र केही महिनाअघि भारतमा पनि उपचार गराएर आएको अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले वताए।
२५ वर्षीय युवा पनि कोरानाको लक्षण देखापरेपछि २७ गते कोरोना अस्पतालमा भर्ना भएका उनको राती १२ वजे निधन भएको हो। उनको स्वावको पिसिआर रिपोट आउन बाकी रहेको छ।
अहिले बुटवल कोरोना अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका जटील विरामी ६ जनाको आईसियुमा र अन्य १६ जनाको जर्नल रुपमा उपचार भईरहेको अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले जानकारीदिनुभयो।
मृतक दुवैजना पुरुष कपिलवस्तुबाट रिफर भई उपचार गर्न बुटवल आएका बिरामी हुन।
अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्ने क्रममा दुवैजनाको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले जानकारीदिएका छन्। बिरामी पुरुषको दाँया फोक्सोमा खराबी, निमोनिया, पिसापमा खराबी देखिएको थियो।
बुटवल अस्पतालमा निधन भएका दुवैजनाको प्रदेस सरकार एवं जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारीक रुपमा घटना सार्वजनिक गरिसकेका छैनन।
अहिलेसम्म प्रदेश ५ मा कोरोनाको संक्रमणबाट १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४हजार ७ सय ७४ जना संक्रमित पहिचान भएका छन्। जसमध्ये अहिले विभिन्न अस्पतालमा ५ सय ८५ जनाको उपचार जारी छ भने अन्य निको भएर फर्कीसकेको प्रदेस ५ स्वास्थ्य विभागका निर्देशक डा. उमाशंकर चौधरीले जानकारीदिनुभयो।
प्रदेश ५ मा १२ जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण अवस्था :
Previous प्रदेस ५ का घुसीयाहरु दिनहु अख्तियारको पञ्जामा
Next सिमानाकामा अवैध २४ लाख भारु बरामद